Masuuliyiinta diinta iyo awqaafta oo beeniyay in khilaaf ka jiro wasaaradooda | Somaliland.Org
November 29, 2011	Hargeysa (Somaliland.Org)- Madaxda iyo Maamulka Wasaarada Diinta iyo Awqaafta ayaa maanta beeniyay war ku soo baxay Wargayska Waaheen Cadadkiisii 708 ee soo baxay shalay kaas oo sheegay in maamul xumo iyo khilaaf uu soo kala dhex galay mas’uuliyiinta Wasaarada Diinta iyo Awqaafta.
Sida ay ku waramayso Wakaalada Wararka ee Solna waxay madaxda wasaaradani shir jaraa’id ku qabteen xarunta Wasaarada Diinta iyo Awqaafta waxaana ugu horayn cadeeyeen in warka uu ka faafiyay Wargayska Waaheen uu dhamaantiiba yahay been abuur isla markaana aanay jirin haba yaraatee wax ka jira .
Agaasimaha waaxda Maamulka ee Wasaarada Diinta iyo Awqaafta Xuseen C/laahi oo halkaasi ka hadlay ayaa iftiimiyay inaan wax maamul xumo ah iyo khilaaf toona ka dhex jirin waaxaha wasaarada isagoo sheegay in ujeedada ay u tageen xarunta madaxtooyada oo uu wargaysku ku hor sawiray iyagoon arkayn ay la xidhiidhay hawlaha shaqo ee u dhexeeya.
Waxaa kale oo uu agaasimahani meesha ka saaray inay wax dacwad ama cabasho ah ay u tageen madaxtooyada.
Isu duwaha Wasaarada Diinta iyo Awqaafta ee Gobolka Saaxil Saleebaan Siciid Cali oo wargaysku ku sheegay in uu Wasiirku u sii igmaday hawlaha wasaarada ayaa xusay inuu dalka ku soo laabtay 23kii bishan isla markaana uu soo gudanayay waajibaadka Xajka isagoo intaas ku daray inaanay jirin wax amar ah oo uu wasiirku u igmaday, waxaanu ka dalbaday wargaysa waaheen inaanu warar xaqiiqda ka fog ummada u gudbin.
Sh.Yuusuf Cabdi Xoore,Sh.Axmed Dhinbiil Guuleed iyo Sh.Maxamed Ismaaciil Khayre “Aw Libaax” oo ka mid ah Agaasime Waaxeedyada wasaarada diinta iyo Awqaafta oo halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in warkaas wargayska waaheen ka faafiyay uu yahay waxba kama jiraan iyo been abuur cad iyagoo intaas ku daray inay wargayskan uga fadhiyaan inuu cadeeyo xaqiiqada warkaas isla markaana ay u gudbin doonaan hay’adaha garsoorka.
Previous PostD/Hoose ee Hargeysa oo digniin adag ugu jeedisay Shirkada khashin ururinta ee DHISNext PostJananada Ciidammadda oo ka hadlay askari la dilay iyo shil baabuur oo khasaare geystay	Blog